Inkokhelo opharetha Umugqa enqaba Bitcoin - Blockchain Izindaba
Inkokhelo opharetha Umugqa enqaba Bitcoin
Inkokhelo Processor Umugqa Yokuqeda Ukusekela Bitcoin
I Umugqa lokukhokha opharetha wamemezela ukuthi izohamba bitcoin phakathi nezinyanga ezintathu futhi ayishiye ngokuphelele ke ngo-Ephreli 23. Lokhu ke kwabikwa ngumphathi umkhiqizo Tom Carlo e yenkampani ibhulogi olusemthethweni.
Umugqa waqala ukusekela ukuthengiselana bitcoin e 2015, batfole zokukhokha ku bitcoins isikhathi esingaphezu 60 amazwe. Nokho, isikhathi eside lokuvumelana ukucutshungulwa, ukwanda isibalo ukuthengiselana akuphumelelanga futhi amacala ezikhulayo wenza bitcoin ezingadumile kakhulu phakathi abasebenzisi Umugqa: “Bitcoin ulahlekelwa ukuhlobana kubasebenzisi bethu. Ukubambisana nezinkampani ukuhweba nawo aqala ngenzuzo kancane bitcoin, “- Carlo uthi.
Tom Carlo waphawula ukuthi Umugqa “wekusasa ubheka mfihlo-zezimali ngokuvamile” futhi, mhlawumbe, esikhathini esizayo uyokusekela altcoins ngaphezulu, kuhlanganise lezinkanyezi, uma uhlamvu kuba ethandwa kakhudlwana. Ngaphezu kwalokho, ebona umbono zenza imisebenzi enjengokwakha Lightning, OmiseGO, Ethereum, Bitcoin Cash and Litecoin.
Abasebenzisi abaningi inethiwekhi asekelwe isixazululo service:
Bitcoin wayemkhulu, wamavukelambuso ngisho kodwa kukhona ngokushesha, #cryptocurrencies eshibhile futhi ezihlukahlukene laphaya manje. Sekuyisikhathi ukwenza indlela izingane ezintsha ku block # StellarLumens #Ethereum
Nakuba abanye abakubheka lokhu isenzo iDemo obona ngokucacile ngosuku olwandulela Lightning nezinye izixazululo scalability ngoba inethiwekhi Bitcoin, abasebenzisi abaningi basakholelwa ukuthi kukhona cryptocurrencies eziningi ongancintisana bitcoin.
Ayikho indlela ukwethula zindaba Umugqa njengoba izindaba ezinhle. Thina ngokuyisisekelo etshela bonke Umamukeli abathengisi ekuqaleni ukuthi bake bakwenza ngokuthi "indlela bubi" futhi manje baye ukuba retool ukwengeza umbani inethiwekhi. Kodwa bengekho. Akhiwe hhayi ukuthuthela Bitcoin ukheshe (noma ezinye) noma. Akhiwe kokushiya
Musa spin le turkey ngokuthi "ukuthi obekungaqondiwe izinkokhelo kungcono okunye", ke kusho ukuthi kuzodingeka silinde kuze kube yilapho semvelo ilungele futhi bese te-ukushumayela kuwo wonke umuntu okwesibili lapho izimali ziphansi futhi. Lusebenza zonke zemali, ethereum akuyona "ukulungele" noma.
Umkhawulo block kufanele baye bakhuliswa eminyakeni emibili edlule, ngaphambi noma yini yalo baba izinkinga zangempela, futhi singathanda ukuba uthenge isikhathi. Kodwa abanye abantu FUD'ed ngezinkinga ngengqondo esizayo ukuthengisa isixazululo esizayo ukuthi yayingazimisele futhi wadala nezindaba omkhulu wangempela samanje. /rant
Ekuqaleni kuka-December, i-bitcoin-izinkokhelo walelwe isevisi Steam umdlalo. Futhi aphuma Ethereum block Stellar lase kakade kumenyezelwa CEO of Kik isithunywa Ted Livingston. Ngokusho kwakhe, Ethereum “ezama ukuba konke kuwo wonke umuntu”, kakhulu ogcwele kakhulu futhi ayisekho kwanelisa izidingo isicelo nge 10,000 abasebenzisi.
Belgian intela igunya ifuna bentela abasebenzisa Foreign Crypto Ukuhwebelana
EBelgian intela auth ...
Thumela Previous:Robotrading noma Ukuhweba imanuwali
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 25 Januwari 2018